मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरू बुझ्दै | चेकअप - कम्पनी | अगस्ट 2021
समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय प्रेस कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार
मुख्य >> कम्पनी >> मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरू बुझ्दै
मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरू बुझ्दै
नुस्खा महँगो पर्न सक्छ, र त्यो तनावपूर्ण छ यदि तपाईंलाई उनीहरूसँग जोड्न समस्या भइरहेको छ भने। स्वास्थ्य बीमा योजना जसले तपाइँको औषधि लागतहरूको केही कभर गर्दछ स्वस्थ रहन केही सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। चिकित्सा भाग डी मद्दत गर्न सक्छ।
मेडिकेयर पार्ट डीले कसरी काम गर्दछ?
मेडिकेयर पार्ट डी मेडिकेयर का एक वैकल्पिक अंश हो जुन प्राय: प्रिस्क्रिप्शन ड्रगमेन्टहरू समावेश गर्दछ। भाग डी निजी बीमा कम्पनीहरु को माध्यम बाट प्रस्ताव गरीएको छ जुन मेडिकेयर मा धेरै व्यक्तिले औषधि लागतहरु लाई अफसेट मद्दत गर्न छनौट गर्छन्।
मेडिकेयरका चार भागहरू छन्: ए, बी, सी, र डी। मेडिकेयर पार्ट एले बिरामी अस्पतालको हेरचाह, कुशल नर्सिंग सुविधा हेरचाह, घरको स्वास्थ्य देखभाललाई इन्स्पेन्टन्ट अस्पतालमा डिस्चार्ज भए पछि, र अस्पताल हेरचाह कभर गर्दछ।
धेरै व्यक्ति जो मेडिकेयरका लागि योग्य हुन्छन् पार्ट A को स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्दछन्।
मधुमेहको लागि सामान्य रगत चिनी के हो
मेडिकेयर पार्ट बीले बाहिरी बिरामी डाक्टरको कार्यालय भ्रमण, एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण, घर स्वास्थ्य सेवा, निवारक सेवा, टिकाऊ चिकित्सा उपकरण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, र शारीरिक उपचार लगायत अन्य सेवाहरु समेट्छ। मेडिकेयरका साथ अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो पार्ट A र भाग बी सुविधाहरू परम्परागत शुल्क-सेवा-सेवा मेडिकेयर, वा मूल मेडिकेयर अन्तर्गत प्राप्त गर्न छनौट गर्दछन्।
मेडिकेयर भाग सी मेडिकेयरको अंश हो जस अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू - मूल मेडिकेयरको सट्टा Part पार्ट ए र बी फाइदाहरू चलाउँछन् र प्राय: प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बेनिफिट पनि प्रस्ताव गर्दछन्। भाग सी योजनाहरूलाई सामान्यतया चिकित्सा सल्लाह योजनाहरू भनिन्छ।
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कभरेज प्राप्त गर्न, चिकित्सा लाभग्राहीहरू स्ट्यान्ड-एक्लो मेडिकेयर पार्ट डी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान (PDP) मा वा मेडिकेयर एडभेन्टेज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान (MAPD) ​​मा नामांकन गर्न सक्दछन्। लाभार्थीहरूले आफ्नो बीमा वाहकलाई मासिक प्रीमियम तिर्न सक्छन्, र त्यसपछि बीमा कम्पनीले कभर गर्ने औषधिहरू खरीद गर्न सकिन्छ। एक कटौती योग्य र copyay वा सिक्सीन्स लाभार्थी द्वारा भुक्तान गर्न सकिन्छ, र बीमा कम्पनीले बाँकी लागत कभर गर्दछ।
त्यहाँ चार चरणहरू छन् मेडिकेयर भाग डी कभरेज वर्षभर जुन औषधि लागत परिवर्तन हुन सक्छ:
कटौती योग्य: मेडिकेयर उपभोक्ताले मेडिकेयर कभरेजको प्रभाव लिनु अघि भुक्तान गर्नै पर्दैन।
प्रारम्भिक कभरेज: मेडिकेयर योजनाहरु र उपभोक्ताहरु प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को लागत साझा। यो कोपे वा सिक्सेन्स प्रत्येक औषधिको तह, र अन्य कारकहरूमा आधारमा योजना द्वारा सेट गरिएको हो।
कभरेज खाली उपभोक्ता र योजनाले कभर गरिएको औषधिहरूमा निश्चित संयुक्त रकम तिर्ने बित्तिक उपभोक्ता कभरेज ग्यापमा सर्छ, जसलाई मेडिकेयर डोनट होल पनि भनिन्छ। २०१ In मा, तपाइँ कि त २ 25% वा% 37% ब्रान्ड नाम र जेनेरिक औषधिहरूको लागि तिर्नुहुन्छ। जे होस्, २०२० मा, यो बोर्ड भर २%% हुनेछ, मेडिकेयर विशेषज्ञ र सह संस्थापक डेनियल के रोबर्ट्स भन्छन्। बुमर फाइदाहरू ।
विनाशकारी कभरेज: मेडिकेयर पार्ट डी कभरेजको अन्तिम चरण जहाँ उपभोक्ताले उनीहरूको औषधि लागतको%% वर्षको अन्त्यमा तिर्दछ। २०१ In मा, विनाशकारी कभरेज पुगेको छ उपभोक्ताले मात्र $ $,१०० कूल आउट-अफ-पकेट खर्चमा भुक्तान गरेपछि।
मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा कुन औषधिहरू ढाक्छन्?
मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरू द्वारा कभर बनाइएका औषधिहरू प्रत्येक व्यक्तिगत बीमा क्यारियरले कभर गरेकोमा आधारित हुन्छ।
एक मेडिकेयर पार्ट डी योजना सामान्यतया प्रत्येक औषधि कोटिबाट कम्तिमा दुई औषधि कभर गर्दछ। योजनाहरू निम्न वर्गहरूबाट प्रायः प्रत्येक औषधि कभर गर्न आवश्यक छ:
एन्टिसाइकोटिक्स: यी औषधिहरू साइकोसिस प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि सिफारिस गरिएको छ। सामान्यतया सिफारिस गरिएको एन्टिसाइकोटिक्सका उदाहरणहरूमा हल्डोल (हेलोपेरिडोल) र रिस्पर्डल (रिसपेरिडोन) पर्छ।
Antidepressants: यी औषधीहरूले धेरै मानिसहरूलाई अवसाद र चिन्ताका विकारहरूको उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। एफफेक्सोर एक्सआर (भेन्लाफैक्सिन) र प्रोजाक (फ्लोक्सेटिन) दुई सामान्यतया निर्धारित एन्टीडिप्रेससन्टहरू हुन्।
एन्टिकोनवल्सन्ट्स: फार्माकोलजिकल एजेन्टहरू समावेश भएको ड्रग्सको यो समूहले मिर्गीको दौरा अनुभव गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछ। एन्टिकोनभल्सेन्ट्स का उदाहरण जुन मेडिकेयर पार्ट डी योजनाले कभर गर्न सक्दछ, केप्प्रा (लेभेटेरसेटम) र लामिक्टल (लामोत्रिगाइन) सामेल छन्।
इम्युनोसप्रेसन्ट्स: यी औषधीहरूले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको शक्ति कम गर्दछ, जुन कहिलेकाँही अंग प्रत्यारोपणको लागि वा स्वचालित प्रतिरक्षा रोगहरूको उपचार गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ। डेल्टासोन र ओरासोन जस्ता प्रेडनिसोन औषधीहरू सामान्यतया सिफारिश गरिएको इम्युनोसप्रेसन्ट्सका उदाहरण हुन्।
क्यान्सर ड्रग्स: मेडिकेयर भाग डी योजनाहरु केहि क्यान्सर औषधि कभर हुनेछ। तपाईको स्वास्थ्यसेवा प्रदायक र बीमा क्यारियरसँग कुराकानी गर्नु महत्वपूर्ण छ कि पर्चा औषधि लाभमा नाम दर्ता गर्नु अघि तपाईलाई चाहिएको औषधि कभर गरिएको छ। सामान्यतया सिफारिस गरिएको क्यान्सर ड्रग्स का उदाहरणहरुमा Avastin (bevacizumab) र Revlimid (लेनिलिडोमाइड) पर्छ।
एचआईभी / एड्स औषधि: एक मेडिकेयर भाग डी योजना एचआईभी / एड्स को लागी केहि पर्चेको औषधिहरु लाई कभर गर्दछ। यस किसिमका ड्रग्सका केही उदाहरणहरूमा ट्रुवाडा (इम्प्रट्रिटाबाइन-टेनोफोभिर), नोर्वीर (रीटोनाभिर), र इन्ट्रेस्रेस (राल्टेगावीर) पर्छन्।
दुबै जेनेरिक र ब्रान्ड नाम औषधि मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर गरिएको छ, तर ब्रान्ड-नाम औषधिहरू लाभार्थीहरूको लागि बढी खर्च हुन सक्दछ। ड्रग्सलाई मेयरकेयर पार्ट डी योजनाहरू तहमा राखिन्छ, र विभिन्न तहहरूमा लागूपदार्थ फरक लागत हुनेछ। ब्रान्ड-नाम औषधिहरू उच्च टायरमा राख्न सकिन्छ जसको एक उच्च कोपे वा सिक्सेन्स लागत छ।
मेडिकेयर पार्ट डीको बारेमा जान्न सक्ने एउटा कुरा यो हो कि यसले ओभर-द-काउन्टर औषधीहरू, प्रिस्क्रिप्शन भिटामिनहरू, र केहि अन्य औषधिहरू ढाक्दैन। हेल्थकेयर प्रदायक वा चिकित्सकसँग कुराकानी गर्नु, र तपाईको योजना विकल्पहरूको बर्षे समीक्षा गर्नु उत्तम तरीका हो कि तपाईको मेडिकेयर पार्ट डी योजना तपाईको व्यक्तिगत मेडिकल आवश्यकताको आधारमा सही योजना हो। तपाईंसँग योजनामा ​​स्विच गर्ने अवसर छ जुन फेल ओपन नामांकनको क्रममा तपाईंको आवश्यकताहरू राम्रोसँग मिल्दछ। मेडिकेयर एडवान्टेज योजना भएका व्यक्तिहरूले मेडीकेयर एडभ्यान्टेज खुला एनरोलमेन्ट अवधिको बखत योजनाहरू स्विच गर्न सक्षम हुनेछन्।
मेडिकेयर पार्ट डी को लागत कति छ?
प्रत्येक भाग डी योजना यसको आफ्नै कटौती योग्य, प्रीमियम, स्तरीय स्तर, र सूत्रहरू सेट गर्न। मेडिकेयर पार्ट डीको साथ मासिक प्रीमियम योजनामा ​​निर्भर गर्दछ। २०१२ को लागि राष्ट्रिय मासिक औसत $ .1१.१ is हो, यद्यपि यसको २०२० मा परिवर्तन हुने सम्भावना छ।
यदि बीमा कम्पनीलाई घटाउन योग्यको आवश्यक छ भने, त्यो पहिले तिर्ने छ, प्रत्येक औषधि औषधि को लागी एक कोपे वा सिक्सीन्स पछि। त्यहाँ घटाउन योग्य को सीमा छ; 2019 को लागि सीमा $ 415 भन्दा बढी हुन सक्दैन।
वयस्कहरुमा कान संक्रमण को लागी प्राकृतिक उपचार
कटौतीयोग्य भुक्तानी भएपछि, मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरूले लाभार्थीहरूलाई या त कागजातहरूको लागि कापाई तिर्नु पर्छ वा सिसुरन्स। यदि सिक्सेन्सोर आवश्यक छ भने, त्यसपछि लाभार्थीले खरीद गरिएको औषधिको एक प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछ।
मेडिकेयरका साथ मानिसहरूलाई असर गर्ने समस्याहरू मध्ये एक हो कभरेज ग्याप भनिन्छ, वा डोनट प्वाल । कभरेज खाली छ जब उपभोक्ता र योजना द्वारा पूरा औषधि लागत एक निश्चित सीमा पुग्छ। एक पटक सीमा पुगेपछि, एक व्यक्तिले उनीहरूको औषधिहरूको लागि उच्च-बाहिरको पकेट लागत तिर्न सक्छ।
सम्बन्धित: के म सिंगलकेयर प्रयोग गर्न सक्दछु जब म मेडिकेयरमा छु?
उच्च आय भएका व्यक्तिहरूले तिनीहरूका पार्ट डी कभरेजको लागि उच्च लागत तिर्न सक्छन्। यसको विपरित, मेडिकेडमा वा थप सहायताका लागि योग्य हुने व्यक्तिहरूले भाग डी अन्तर्गत उल्लेखनीय कम लागत तिर्न सक्छ।
को संस्थापक मेडिकेयरक्विक , Kathe Kline, सम्भावित लागत अनुमान गर्न आदेशमा मेडिकेयर भाग डी कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे पूर्ण समझ प्राप्त गर्ने सल्लाह दिन्छ।
प्रत्येक योजनाको आफ्नै प्रीमियम लागत, कटौती योग्य, कपि रकम, सिक्शन्स रकम, र सूत्रहरू छन्, क्लाइन भन्छिन्। सूत्रले तपाईंलाई बताउँछ कुन औषधि योजना कभर गर्दछ, र तपाईंको लागतहरू के हुनेछ। धेरै व्यक्ति गल्तीले केवल प्रीमियम र कटौती योग्यमा हेर्नुहोस्। त्यो गल्ती हो। मेरो सिफारिश छ कि मेडिकेयरमा व्यक्तिहरू MyMedicare.gov भनिने उपकरणको प्रयोग गरेर प्रत्येक वर्ष आफ्नो लागतहरू हेर्छन्। यस तरीकाले तपाईं सबै लागतहरू खोज्नुहुनेछ, तपाईंको औषधि सहित, जुन खर्चको ठूलो हिस्सा हुन सक्छ।
म कसरी मेडिकेयर पार्ट डी पाउन सक्छु?
यसमा योजना विकल्पहरू हेर्न र तुलना गर्न यो सजिलो छ Medicare.gov यदि तपाईं मेडिकेयर पर्सन डी जस्तो मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग योजनाको लागि साइन अप गर्न चाहानुहुन्छ भने १-8००-मेडिकेयर कल गर्नु र सल्लाहकारसँग कुरा गर्नु पनि राम्रो विकल्प हो यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएको छ भने।
के तपाई एन्टिबायोटिक लिइसके पछि खमीर संक्रमण लिन सक्नुहुन्छ
निश्चित गर्नुहोस् प्रीमियम, कापेमेन्ट, सिक्युरन्स, र कटौतीयोग्यहरू, र कभर गरिएका औषधिहरू र सम्भावित लागूऔषध प्रतिबन्धहरूमा एक नजर राख्नुहोस् तपाईंको लागि उत्तम मेडिकेयर पार्ट डी योजना छनौट गर्नको लागि।
मेडिकेयरमा नयाँ भर्ना हुनेहरूको लागि प्रारम्भिक नामांकन अवधिहरू र जसले years old बर्ष उमेर पुगिरहेका छन् उनीहरूमा तीन महिना अघि, महीनाको महीना, र तीन महिना उनको जन्मदिन पछी समावेश छ। वार्षिक ओपन नामांकन अवधि गिरावट अक्टुबर १ 15 देखि डिसेम्बर runs सम्म चलाउँदछ। यदि तपाईं यी समय फ्रेमहरू भित्र भर्ना गर्नुभएन भने, तपाईंले ढिला ईनरोलमेन्ट जरिवाना तिर्न सक्नुहुन्छ। यो एक राम्रो विचार हो मेडिकेयर.gov जाँच गर्न को लागी निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ मिति जान्नु भएको छ र यो निश्चित गर्न को लागी तपाइँ विशेष दर्ता अवधिको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
कार्डियक अरेस्ट बनाम हार्ट अट्याक: कुन खराब हो?
संयुक्त राज्यमा द्विध्रुवी विकार कति सामान्य छ
स्नायु दुखाई को लागी gabapentin को सामान्य खुराक
के कारण तपाइँको पोटाशियम कम हुन सक्छ
प्रत्येक वर्ष कति जना मानिसहरूलाई मुटुको दौड हुन्छ
म कहाँ सस्तो जन्म नियन्त्रण पाउन सक्छु